MK-677 (Ibutamoren) ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းသည်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါသလား? Sarm ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/MK-677 (Ibutamoren) ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းသည်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါသလား? Sarm ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း [2019 NEW]
အပေါ် Posted 09 / 29 / 2019 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
1.What MK-677 (Ibutamoren) ဖြစ်သနည်း
MK-677 (Ibutamoren) အမှုန့် (159752-10-0) အသစ်တခုကြီးထွားဟော်မုန်း secretagogue (GHS) ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးကကြီးထွားဟော်မုန်း secretagogue တိုးကြီးထွားဟော်မုန်းပမာဏအထောက်အကူပြုရန် secretagogue အဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ဦးဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးထွားဟော်မုန်းထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ဒီအလှည့်ကြွက်သားတစ်သျှူးဖှံ့ဖွိုးတိုးမြှင့်တင်ရန်ရန်သင့်အားကူညီ။
MK-677 (Ibutamoren) အမှုန့် သဘာဝကဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကဲ့သို့အခြားဇီဝကမ္မနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မထားဘူး။ အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသငျသညျ testosterone ဟော်မုန်းဖိနှိပ်မှုများကဲ့သို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကြုံတွေ့ရခြင်းမရှိဘဲကြီးထွားဟော်မုန်းပမာဏတစ်ခုတိုးတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ MK 677 ကာယဗလအကျိုးကျေးဇူးများကိုမြောက်မြားစွာရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းတွင်ဤဆောင်းပါး၌ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဆှေးနှေးပါမညျ။
2 ။ အဘယ်ကြောင့် MK-677 (Ibutamoren) ကွဲပြားခြားနားသောအမည်အားရှိသနည်း
Ibutameron လည်း mk677 nutrobal, Ibutamoren Mesylate အဖြစ်လူသိများသည်နှင့်အချို့သောလူတွေက MK 677 (Ibutamoren) အမှုန့် sarm အဖြစ်ကရည်ညွှန်းပေမည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်အမည်များကိုတူညီတဲ့ဒြပ်ပေါင်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ အချို့သောလူ sarm အဖြစ်ဝင်းဈေးကှကျသျောအခြို့ကျွမ်းကျင်သူများက sarms မိသားစုပိုင်ပါဘူးသူကပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာကြီးထွားဟော်မုန်းများနှင့် IGF-1 (အင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအချက်) ၏အဆင့်ဆင့်လှုံ့ဆော်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်တဲ့မူးယစ်ဆေးတွေ့ရှိရန်အလွန်ရှားပါးကြောင့် Ibutamoren ကိုလည်းအထူးမူးယစ်ဆေးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။
3 ။ MK-677 (Ibutamoren) ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ,
MK-677 (Ibutamoren) အမှုန့် (159752-10-0ကြီးထွားဟော်မုန်း (GH) ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်) nutrobal အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားအချက်များ-1 (IGF-1) ထည့်ဘယ်လို ghrelin ဟော်မုန်းလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုအတုယူအားဖြင့်ဒီရရှိ။ သငျသညျရှေ့တျော၌အနှံ့လာဖူးဘူးဆိုပါက Ghrelin တစ်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ကဦးနှောက်၏ဆက်ကပ်အပ်နှံ GHSR (ghrelin receptors) ၏တဦးတည်းပေါ်ကိုအလွယ်တကူချည်နှောင်ဖို့နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့နှိုးဆွပေး, ထို့နောက် receptors ghrelin ဦးနှောက်ထဲမှာကြီးထွားဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုမြှင့်လုပ်ဆောင်။ ဒါဟာ CNS (ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်) တွင်တစ်ဦး neuropeptide အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာဟော်မုန်းအစာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်၎င်း၏အာနိသင်များအတွက်ရေပန်းစားသည်။
ဒါဟာအစကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေအတွက်စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးထိန်းညှိခြင်းနှင့်လည်းခန္ဓာကိုယ်အဆီ digests လမ်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ ဒါဟာအစအဝလွန်ခြင်းနဲ့တူအခြေအနေများနှင့်အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါကနေ recover လုပ်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်များ၏စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်တွင်အသုံးပြုတဲ့အခါ, MK 677 အခြားမည်သည့်ဟော်မုန်းနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲ HGH ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။ က Testosterone နဲ့ကြီးထွားဟော်မုန်း၏လက်ရှိအဆင့်ဆင့်ဖိနှိပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လည်းယူသောသူတို့၏အမျိုးအတျောမြားမြားသငျသညျအကြိုးကြေးဇူးမြားကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ဆုကြေးဖြစ်သော, အ MK 677 ဖြည့်စွက်ချီးမွမ်း၏။
4 ။ MK-677 (Ibutamoren) အကျိုးကျေးဇူးများ
အဓိက MK 677 အကျိုးအမြတ်တစ်ခုမှာတိုးမြှင့်ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူသည်။ MK 677 ဖြည့်စွက် IGF-1 နှင့် GH အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးကတည်းကအသုံးပြုသူတစ်ဦးကိုအလွယ်တကူအများကြီးအရွယ်အစားပေါ်တွင်တင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသုတေသနနှင့်သိပ္ပံကထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်သယ်ဆောင်လေ့လာရေးအထက်အလွန်ကြီးစွာသောအထူးသဖြင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းချို့တဲ့နှင့်အတူလူနှင့်အထက်အမျိုးသားများတွင် mussle အစုလိုက်အပြုံလိုက်အတွက်တိုးလာအထူးသဖြင့် 60 နှစ်နှင့်ပြသခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများထံမှအတော်များများ MK 677 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလည်းဒီမူးယစ်ဆေးကြွက်သားတစ်သျှူးအဆောက်အဦးအပေါ်တစ်ဦးအကြီးအအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်ရှိသည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
အသက်အရွယ်အနာစိမ်းနှင့်အမျှအရိုးသိပ်သည်းဆမှေးမှိန်။ အတော်များများကဟောင်းကလူမိုဘိုင်းနှင့်နာကျင်မှုမရှိခြင်းဖြစ်စေတဲ့အရိုးခြို့တဲ့နဲ့အရိုးပွရောဂါကနေခံစားနေကြရသည်။ တချို့ကလေးတွေနှင့်လူငယ်လူကြီးများလည်းဒီကတဆင့်သွားပါလေစေပေမယ့်လျော့နည်းသွားအရိုးသိပ်သည်းဆကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ MK-677 အမှုန့်ဖြည့်စွက် ကြီးထွားဟော်မုန်းလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်အလှည့်အတွက်အရိုးလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်မြှင့်လုပ်ဆောင်။ သောမူးယစ်ဆေးအရိုးအားကောင်းနှင့်အတူကူညီနိုင်ပုံကိုပါပဲ။
ရှစ်အစာရှောင်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်ထွက်သယ်ဆောင်တဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနလေ့လာမှုတွင်, Ibutamoren MK 677 ကြွက်သားပိန်နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်ဆုံးရှုံးမှု reverse နိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုမူးယစ်ဆေးလည်းတင်ပါးဆုံရိုးကျိုးတိုးမြှင်ကြွက်သားခွန်အားနှင့်ပိုကောင်းတဲ့အကျိုးအမြတ်အောင်မြင်ရန်သူအသက်လူနာကကူညီပေးခဲ့ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
နီးပါးတိုင်းကာယဗလမယ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဒဏ်ရာရက်, သို့မဟုတ်ပင်ရက်သတ္တပတ်များအတွက်အားကစားရုံထဲကသူတို့ကိုသော့ခတ်ခြင်းဖြင့်သူ / သူမ၏တိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေးဘယ်လိုဝန်ခံ။ သငျသညျကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အားကစားရုံ၌သင်တို့၏အချိန်အများစုကိုဖြုန်းနေလျှင်, ဒဏ်ရာမလွှဲမရှောင်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်သင့် hard သင်တန်းကနေရရှိလာတဲ့ကြွက်သားထုထည်အတွက်လျင်မြန်စွာတိုး, ဒဏ်ရာမှဦးဆောင်သွေ့ခြောက်သောအရိုးတို့အပါအဝင်သင့်ရဲ့တစ်ရှူးအပေါ်ဖိအားတွေအများကြီးထားနိုငျသညျ။
ဒါကြောင့်ပျက်စီးသွားသောရွတ်, အရွတ်နှင့်အရိုးပြုပြင်မှကြွလာသောအခါ, ကြီးထွားဟော်မုန်းမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ကြီးထွားဟော်မုန်းများအဆင့်ဆင့်တိုးပွားလာခြင်းအားဖြင့်, MK 677 ဖြည့်စွက်ဆက်တစ်ရှူးပြုပြင်ကြခြင်းနှင့်လည်းကျန်းမာထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းသေချာ။ အဆိုပါအရိုးသိပ်သည်းဆကိုသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်နှင့်, အရှင်သင်တို့အရိုးပိုပြီးကြွက်သားထုထည်ကိုကိုင်ထားရန်သင့်အားဖွင့်ခွန်အား၌တိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်။ ရလဒ်အဖြစ်သင်တို့သည်နောက်တဖန်ပုံမှန်အတိုင်းဒဏ်ရာမှကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။
အများစုမှာအသုံးပြုသူများအ mk677 သူတို့ကိုကူညီဝန်ခံ အဆီဆုံးရှုံးမှုစွဲစေ။ Mk 677 အဆီဆုံးရှုံးမှုရလာဒ်များ GH ပိန်ကြွက်သားထုထည်ဖွံ့ဖြိုးရန်သင့်အားဖွင့်စဉ်သငျသညျအရေပြားအောက်ဆုံးနှင့် visceral အဆီနှစ်မျိုးလုံးကိုမီးရှို့ကူညီစေခြင်းငှါတစ်ခုတည်းသောဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သတင်းပို့ခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်အဖြစ် Ibutamoren အမြဲခန္ဓာကိုယ် recomposition အစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းထားသည်။
ကြီးထွားဟော်မုန်းအရေပြားဆဲလ်မြှင့်တင်ရန်သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ MK-677 GH မြှင့်လုပ်ဆောင်ကတည်းကမူးယစ်ဆေးဆံပင်၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်, လက်သည်း, အရေပြားနှင့်အားကောင်းလာစေပြီးနုပျိုနိုင်သည်အဘယ်ကြောင့်, ထိုပါပဲ။
နောက်ထပ် MK 677 အကျိုးကျေးဇူးက ghrelin အဲဒီ receptor ကိုလှုံ့ဆျောနှင့်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလိုငှါဖြစ်ပါသည် nootropic ဆိုးကျိုးများ။ NCBI ကထုတ်ဝေတဲ့သုတေသနလေ့လာမှုအရသွယ်ဝိုက်နှစ်ခုယန္တရားများလွှမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့်ဦးနှောက်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုတိုးမြှင့်ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားယန္တရားများတိုးမြှင် IGF-1 မှတ်ဉာဏ် retention ကိုနှင့်သင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်အတွက်ကူညီပါဝင်သည်။ နှင့်အညီ, REM အိပ်စက်ခြင်း၏အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်တိုးမြှင့်မှတဆင့်။ ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးသိမြင် function ကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သောကြောင့်အိပ်စက်ခြင်းအလွန်အရေးပါသည်။
Mk 677 cortisol, အင်ဆူလင် prolactin, ဂလူးကို့စများ၏ပြင်းအားပြောင်းလဲမပါဘဲ IGF-1, IGFBP-3 နှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းများချို့တဲ့ခြင်းနှင့်အတူကလေးတွေအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်းပမာဏတိုးပွါး, thyroxine (T4), thyrotropin သို့မဟုတ် triiodothyronine (T3).
ကြီးထွားဟော်မုန်းမြှင့်တင်ရန်အနာပျောက်စေသောအများနှင့်တစ်သျှူးသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးအနာဒါ Mk 677 ကြီးထွားဟော်မုန်းပမာဏတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ထိုအနှင့်အတူကူညီပေးသည်။ ဤသည်မတိုင်မီ ibutamoren အသုံးပြုသောသူကာယဗလ၏အစီရင်ခံစာများကထောက်ခံသည်။
MK-677 ကိုအသုံးပြုကြသူလူများရှေ့မှာ Hangover ကနေကယ်ဆယ်ရေးတစ်ဦးခံစားချက်သတင်းပို့ပါ။
တစ်ဦး Ghrelin Mimetic ဖြစ်ခြင်းကိုသင် Ibutamoren အောက်မှာစဉ်အစားအသောက်တွေအများကြီးယူမမြျှောလငျ့သငျ့သညျ။ ဒီကသင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သည်နှင့်အညီအကျိုးရှိသို့မဟုတ်မဲ့ဖြစ်စေသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင်က non-အငြင်းပွားဖွယ် MK 677 ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်နားလည်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Ibutamoren ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်း၌ကြီးသောအလုပ်ဖြစ်တယ်။ စစ်တိုက်ခြင်းနှင့်ရာသီအလိုက်မမှန်ခြင်းနှင့်ဓာတ်မတည်၏ဝေးနေဖို့ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအလွန်တိုးတက်နေပါတယ်။ သငျသညျစိတျငွိမျးခမျြးရေးအပြည့်အဝတစ်ဦးအဆင်ပြေဘဝအသကျရှငျစတင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
5 ။ MK-677 (Ibutamoren) သံသရာ
သံသရာ 1: အဆုံး MK 677 (Ibutamoren) အမှုန့်အကျိုးအမြတ်အောင်မြင်ရန်စေရန်, သငျသညျအကြာတွင်အတွက် 10 န်းကျင် 24 နာရီနှုန်း 11-20mg မှဖြည့်စွက်မတိုင်မီအသုံးပြုမှု၏ပထမဦးဆုံး 25 ပတ် 24 နာရီနှုန်း 12mg နှင့်အတူစတင်လိုအပ်ပါတယ်th အပတ်က။ ဒီအနှုတ်သို့မဟုတ်ဆေးတောင့်တို့ကတစ်အရည်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။
သံသရာ 2: ကိုလည်းသင် 15 နာရီနှုန်း 24mg နှင့်အတူစတင်နှင့် 677 ရက်သတ္တပတ်ကျော်လွန်သင့်ရဲ့ MK 12 သံသရာအရှည်ချဲ့ထွင်နိုင်ပါ။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ pituitary gland သို့မဟုတ်အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သံသရာ 3: အများစုမှာကာယဗလ Off-သံသရာလာမယ့်တစ်ရက်ကို 677mg ၎င်းတို့၏ MK 50 သောက်သုံးသောတိုးချဲ့နှင့်ရှစ်ပတ်ကြာတဲ့ MK 677 သံသရာအရှည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ opts ။
သံသရာ 4: သင်ကြွက်သားတည်ဆောက်ချင်လျှင်, အသုံးပြုသူ 30 နာရီနှုန်း 24mg တစ် Ibutamoren သောက်သုံးသောယူပြီးအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သံသရာ 5: သင်၏အဓိကရည်မှန်းချက်အဆီချွတ်သွန်းလောင်းရန်ဖြစ်ပါသည်လျှင်အများကြီးအတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများအ 20 နာရီနှုန်း 24mg ယူပြီးအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သံသရာ 6: သင်၏အဓိကရည်မှန်းချက်ဒဏ်ရာအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုလျှင်, တစ်နေ့လျှင် 677-10mg ၏ MK 20 သောက်သုံးသောအလွန်အမင်းအကြံပြုသည်။
ကောင်းမွန်သောသတင်းကြောင့်မဆိုဟော်မုန်းနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပါဘူးသကဲ့သို့သင်တို့ MK 677 တစ်ရာခိုင်နှုန်း (Post ကို Cycle ကုထုံး) မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
6 ။ အကောင်းဆုံးကို MK-677 (Ibutamoren) သောက်သုံးသောကဘာလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနနှင့်အတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများထံမှအစီရင်ခံစာများ 20mg မှ 30mg အရှိဆုံးအကောင်းဆုံး MK 677 သောက်သုံးသောကြောင်းပြသထားတယ်။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်တစ်နေ့လျှင် ibutamoren ၏ 30mg ထက်ပိုယူသတင်းပို့ကြပါပြီ, သို့သော်ဤပိုကောင်းရလဒ်တွေကိုမပေးခဲ့ပါဘူး။ MK 677 သံသရာအရှည် ibutamoren သောက်သုံးသောထက်ပိုမိုအရေးပါဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။
ဒါဟာသင်အချိန်တစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအတွက် ibutamoren ယူမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ကြီးထွားဟော်မုန်းများ၏အဆင့်ဆင့်သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းတည်ဆောက်ရန်ရှိသည်။ သငျသညျပင်ဆိုးကျိုးများခံစား start ရှေ့တော်၌ထိုဟော်မုန်းများ၏တဖြည်းဖြည်း buildup ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အထိကြာလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုသင်တို့ကိုလည်းယူရန်လိုအပ်ပါတယ် MK 677 ပမာဏကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ဤတွင်ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အကြံပြုဆေးညွှန်းဖြစ်ကြသည်။
ကြွက်သားအဆောက်အဦ: တစ်နေ့လျှင် 30mg
အဆီဆုံးရှုံးမှု: တစ်နေ့လျှင် 20mg
ဒဏ်ရာအနာ: 10-20mg တစ်နေ့လျှင်
သငျသညျအသုံးမကြလျှင် Ibutamoren အမှုန့် (159752-10-0) မတိုင်မီသင်ခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်ပုံကိုကြည့်ရှုရန် 10mg နှင့်အတူစတင်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
7 ။ MK-677 (Ibutamoren) ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုရှိသလား
Mk-677 ရှိလျှင်အလွန်နည်းပါးခြင်းနှင့်အသေးစားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသည်, သူတို့ပေါ်ပေါက်လျှင်သူတို့ကအလွယ်တကူစီမံခန့်ခွဲဖြစ်ကြသည်။ ဤတွင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကိုနေသောခေါင်းစဉ်:
အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အောက်ပါနေ့ရက်ကိုယေဘုယျအားပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ခံစားချက်မှရရှိလာတဲ့ ibutamoren ယူပြီးပြီးနောက် 12 နာရီသလောက်အဘို့မပြတ်မတောက်အိပ်စေနိုင်သည်။ သင်ဤကြုံတွေ့ရလျှင်, သင်ဆေးထိုးဆင်းစကေးသို့မဟုတ်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်ကခွဲနှင့်ဤ MK 677 ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်သင့်ပါတယ်။
ကအားလုံးကိုအသုံးပြုသူများဖြစ်ပေါ်မည်မဟုတ်ပါသော်လည်း ibutamoren ယူပြီးသောအခါအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အပျော့စားကြွက်သားကြွက်တက်ရ။ သငျသညျ ibutamoren တာကိုရပ်တန့်တစ်ချိန်ကဤသည် MK 677 ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းချွတ်ဝတ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့သည်လည်းရေ retention ကိုတိုးပှားအစာစားချင်စိတ်ကိုခံစားစေခြင်းငှါသင်တို့မူကားလည်းမြင့်မားသော ibutamoren သောက်သုံးသောယူသည့်အခါဤအများသောအားဖြင့်ပေါ်ထွန်း။ သငျသညျ MK 677 တာကိုရပ်တန့်တဲ့အခါမှာအချိန်အတန်ကြာပြီးနောက်, ဤအရာအလုံးစုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသဘာဝကျကျမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။
8 ။ MK-677 (Ibutamoren) ၏ထက်ဝက်ဘဝကဘာလဲ?
Mk 677 ဝက်ဘဝကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 24 နာရီဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုဒီသီအိုရီကိုဆိုလိုသည်တဦးတည်းတစ်နေ့လျှင်သူ / သူမ၏နေ့စဉ်ထိုးတစ်ကြိမ်ယူနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါပေမယ့်သင်ကတစ်နေ့လျှင်ဦးတည်းထိုးယူလျှင်, သင်၏ကြီးထွားဟော်မုန်းများ၏အဆင့်ဆင့်တစ်ကြိမ်မှာ Spike စေခြင်းငှါစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ကြသည်။
ဤသည်မောပန်းခြင်းသို့မဟုတ် lethargy တစ်ဦးခံစားချက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမဆိုတနေ့မှာနှစ်ခုသို့သင့်ရဲ့ထိုးကွဲသို့မဟုတ်ပဲအိပ်ရာမှရတဲ့မတိုင်မီဆေးထိုးလောင်ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်, သငျသညျရှငျဘုရငျနှငျ့တူအိပ်လိမ့်မယ်နှင့်သင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအောက်ပါနေ့ရက်ကိုတလျှောက်လုံးထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။
9 ။ MK-677 (Ibutamoren) ရလဒ်များ
ဒါဟာအစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့ကာယဗလနှင့်အခြားအသုံးပြုမှုအတွက် Mk 677 ရလဒ်များကိုအကြီးဖြစ်ကြောင်းပြောမှန်ကန်သောဖြစ်ပါတယ်။ Ibutamoren ကကြွက်သားအဆောက်အဦကိုတိုးမြှင့်ကတည်းကအလွန်ထိရောက်ဒြပ်ပေါင်းသည်လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာအရေပြား, ဆံပင်နှင့်အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုတိုးတက်အောင်အတူကူညီပေးသည်။
ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ရလဒ်တွေကိုမီနှင့်အပြီး Mk 677 shared သူကိုအသုံးပြုသူများ ibutamoren ကိုအလွန်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သူတို့ကအချို့သောခန္ဓာကိုယ်အဆီဆုံးရှုံးနေချိန်မှာကြွက်သားမြင့်မားသောငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်။
ibutamoren ကဲ့သို့အခြားခန္ဓာကိုယ်အဆောက်အဦ SARMs နဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါ MK-2866 နှင့် LGD-4033ဒါကြောင့်စိတ်ကို-မှုတ်ရလဒ်များပေးခြင်း, လုံးဝသင့်ရဲ့ကောင်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းသင်အကောင်းဆုံး Ibutamoren အမှုန့် (159752-10-0) ကာယဗလရလဒ်များကိုရချင်တယ်ဆိုရင်အထဲကအလုပ်လုပ်နှင့်သင့်လျော်သောအစားအစာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်သတိပြုပါသင့်ပါတယ်။
10 ။ MK-677 (Ibutamoren) FDA ကအတည်ပြုသလဲ?
ibutamoren နေဆဲအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနယူးမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကကသေး FDA ကအတည်ပြုကြပြီမဟုတ်။ သို့သော် MK 677 စမ်းသပ်မှုတွေအမူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ကင်းသည်ကိုဝန်ခံသူကာယဗလအသိုင်းအဝိုင်းအချို့ကျွမ်းကျင်သူကာယဗလအသုံးပြုသောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစကျယ်ပြန့်ကိုလည်းမူးယစ်ဆေးအကျိုးရှိစွာကြောင်းဝန်ခံသည်သူကိုသိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့်လေ့လာခဲ့ပါပြီ။
11 ။ ဘေးကင်းလုံခြုံ MK-677 (Ibutamoren) လား?
အဆိုပါအကြံပြုဆေးများမှာယူလျှင် Ibutamoren လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျန်းမာတဲ့လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အထူးသဖြင့်အလွန်လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးအကြံပြုထက်ပိုမိုမြင့်မားဆေးများအတွက်ယူတတ်လျှင်သို့သော်အသုံးပြုသူများဖောနှင့်ကြွက်သားကြွက်တက်တွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်သင်အကြံပြုထိုးထက်ပိုမိုမြင့်မားဆေးများယူချင်သင့်သလဲ
သငျသညျ Ibutamoren သုံးပြီးရပ်တန့်တစ်ချိန်ကဒါ့အပြင်ကြုံတွေ့စေခြင်းငှါအနည်းငယ်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်နိမ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးချိန်တွင်ပင်အလွယ်တကူစီမံခန့်ခွဲဖြစ်ကြသည်။
12 ။ MK-677 (Ibutamoren) Buy မှဥပဒေရေးရာလား?
လူအများစုဟာမမေးမရောင်းရန် MK 677 ပါသလဲ သင်သည်ထိုသူတို့၏တဦးတည်းဆိုရင်စိတ်မပူပါနဲ့, ကျွန်တော်ဒီမှာမေးခွန်းဖြေဆိုကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လောလောဆယ် MK-677 အမှုန့် (159752-10-0) သုတေသနမူးယစ်ဆေးအဖြစ်ရောင်းချရန်သာရရှိနိုင်သည်, ထို့ကြောင့်သင်ကာယဗလထိုသို့လိုချင်ကြောင်းပြောပါလျှင်သီအိုရီကမူးယစ်ဆေးရဖို့ရန်ခဲယဉ်းသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကာယဗလ၏အများစုသူတို့သာသူတို့ရဲ့ဝယ်ယူမှုအပြစ်လွတ်စေသုတေသနအသုံးပြုမှုအတွက်ကြောင့်ဝယ်ယူနေကြောင်းဆိုပါတယ်။ သငျသညျ button ကို '' MK 677 အွန်လိုင်းကိုဝယ် '' ကြောင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါမီ, သငျတို့ထံမှဝယ်ယူနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဥပဒေရေးရာနှင့် legit ကြောင်းသေချာပါစေ။ nutrobal ၏ညစ်ညူးပုံစံလေးနက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူမဝင်စေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်သင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အများဆုံးစင်ကြယ်သောပုံစံဝယ်ယူနေကြောင်းသေချာအောင်သင့်ပါတယ်။
13 ။ ကာယဗလလေ့ကျင့်သည် MK-677 (Ibutamoren)
Ibutamoren မကြာသေးမီကကာယဗလအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။ mk677 nutrobal ကျနော်တို့မှာအများကြီးကြွက်သားအဆောက်အဦးအတွက်လျှောက်ထားလျက်ရှိသည်အဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းပြချက် GH အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့ဖြစ်၏။ ကာယဗလအတွက်သူလူတိုင်းအမြဲတမ်း leanest နှင့်အကြီးမားဆုံးဖြစ်ခြင်းမျှော်လင့်နေပါတယ်။
ကြီးထွားဟော်မုန်းခန္ဓာကိုယ်အဆောက်အဦများတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှကတည်းကလုံခြုံတည်းခိုနေစဉ်, သူတို့ကတတ်နိုင်သမျှမြင့်မားအတွက်ဖြစ်ချင်တယ်။ ကြီးထွားဟော်မုန်းများ၏အဆင့်ဆင့်မြင့်မားခြင်း, မြန်ဆန်လွယ်ကူတစ်ကာယဗလမယ်အပိုကြွက်သား add နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းအလွန်အဘိုးထိုက်သောဖြစ်တဲ့အတွက် Nutrabol မှလွဲ. ကြီးထွားဟော်မုန်းတိုးမြှင်အဘို့အဘယ်သူမျှမကအခြားအိတ်ကပ်-ဖော်ရွေဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်။ Mk 677 နှိုင်းယှဉ်လမ်းအများကြီးတတ်နိုင်ဖြစ်ပါသည် HGH (လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်း) နှင့်ထိထိရောက်ရောက်ကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာအထိလူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းပမာဏတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
သင်အွန်လိုင်းတစ်ခု MK-677 အမြောက်အများအမိန့်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ရောင်းရန် MK 677 သုတေသနများအတွက်ဓာတုအဖြစ်တရားဝင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်း ibutamoren ဝယ်များစွာသောကာယဗလမြင်သာသုတေသနအသုံးပြုရန်ရဲ့တောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာသင် Nutrobal အမြဲအတူ stacked ဖြစ်ပါတယ်သိသောလည်းအရေးကြီးပါတယ် SARMs။ တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောသာဓက S23, MK-677 ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပြီး, RAD140 (Testolone) အမှုန့်.
ကနျြးမာရေး၏အမေရိကန်အမျိုးသားဆေးပညာစာကြည့်တိုက်, အမျိုးသား Institutes, Ralf Nass, Suzan အက်စ် Pezzoli, မာရိ Clancy Oliveri ဂျိမ်းစ်တီ Patrie, ဖရန့်အီး Harrell, Jr. ဂျိုဒီအယ်လ် Clasey, စတီဗင်ခ HeymsfieldMark အေ Bach, မာရိ Lee က Vance နှင့်မိုက်ကယ်အို Thorner, MB, BS, D.Sc, ကျန်းမာရေးအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရေးစပ်သီကုံးမှုနှင့်လက်တွေ့ရလဒျတခုတခုအပေါ်မှာခံတွင်း Ghrelin Mimetic သက်ရောက်မှုအသက်ကြီးလူကြီးများ: ကျပန်း, ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်။
Janssen ငါ Heymsfield SB, 468-18 နှစ်အသက် 88 ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်ဝမ် Z ကို, Ross က R. အရိုးကြွက်သားထုထည်နှင့်ဖြန့်ဖြူး။ J ကို Apple က Physiol ။ 2000; 89: 81-88
Adunsky အေ, Chandler ဂျေ, Heyden N. , Lutkiewicz ဂျေ, Scott BB, Berd Y. ။ ။ ။ Papanicolaou DA (2011) ။ MK-0677 (ibutamoren mesylate) တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးခြင်းမှပြန်လည်လူနာကုသမှုများအတွက်: တစ်ပေါင်းစုံပါ Random, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled အဆင့် IIb လေ့လာမှု။ Gerontology နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုကုသစောင့်ရှောက်, 53 (2), 183-189 ၏မော်ကွန်း။
34 Views စာ
သိမှုစွမ်းရည်မြှင့်များအတွက်အကောင်းဆုံး Nootropics Aniracetam Powder
12 ခြေလှမ်းများအတွက် steroids Powder ပေးသွင်း Choose လုပ်နည်း
အဆိုပါ 10 လူကြိုက်အများဆုံးဟို steroids Raws ပစ္စည်း anabolic steroids ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများအားဖြင့်အထင်လွဲမှားမှုများ
Exemestane (Aromasin) အမှုန့်
Sunifiram (DM235) အမှုန့်
Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester (CAPE) အမှုန့်